योग र ध्यान गर्नेबित्तिकै अनुभव गर्न सकिन्छ यस्तो परिवर्तन | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य योग र ध्यान गर्नेबित्तिकै अनुभव गर्न सकिन्छ यस्तो परिवर्तन
२०७७, ७ असार आईतवार ०८:४५
(180621) -- ATHENS, June 21, 2018 (Xinhua) -- Two women practice Yoga at Filopappou Hill near Acropolis in Athens, Greece, on June 20, 2018. The UN General Assembly declared June 21 as International Yoga Day in 2014. (Xinhua/Lefteris Partsalis) (zxj)
तपाईंको उमेर जतिसुकै होस् । तपाईंको अवस्था जस्तोसुकै होस् । योग गर्नका लागि कुनै छेकबार छैन । जहाँ पनि, जहिले पनि तपाईंले योगलाई आफ्नो दैनिकीको हिस्सा बनाउन सक्नुहुन्छ ।हामीकहाँ योगको अभ्यास सदियौंदेखि हुँदै आएको छ । हाम्रा पूर्खाहरूले यसको अभ्यास, विकास र विस्तार गरे । आजको दिनमा भने योगको महिमा र महत्वलाई हामीले भुल्दै गएका छौं ।
उनले योगीको जीवन र अभ्यासको जानकारी जम्मा गरे र त्यसलाई विस्तार गरे । उनले योग सूत्र लेखे, खासमा उनी योगको प्रमाण, चेतना र मानवीय परिस्थितीको सूत्र हुन् । विज्ञहरू भन्छन्, योग ब्रह्मान्ड जतिकै प्राचीन हो । योगको उद्देश्य जीवनलाई साँचो रुपमा बुझ्नु हो । साथै, आफूलाई जीवन र मृत्युको चक्रबाट अलग गर्नु पनि हो ।संस्कृतमा योग शब्दको अर्थ जोड्नु वा मिलाउनु हो । स्वय‌ंलाई जान्नु हो ।
एक पटक सही र समुचित ढंगले योग गरिसकेपछि यसलाई निरन्तर रुपमा अपनाउन मन लाग्छ। नियमित रुपले योग गरिरहँदा शरीर लचिलो, फुर्तिलो, तन्दुरुस्त अनुभव हुनेछ । मन चङ्गा हुनेछ । यससँगै योग र व्यायामले दीर्घकालीन रुपमै निरोगी र तन्दुरुस्त बनाइराख्छ । शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ।त्यसो त योगले क्यान्सरजस्ता कतिपय घातक रोगको सम्भावित जोखिमबाट मुक्त राख्छ । Agency
Previous articleघरमै बसेर योगाभ्यास
Next articleयोग किन, कसरी र कसले गर्ने ?